ဥပုသ်စောင့်တာ ဝိတ်ကျစေမလား။ -Hello Sayarwon
ဥပုသ်စောင့် တာ ဝိတ်ကျစေမလား။
ဝါတွင်းကာလတို့၊ သင်္ကြန်တို့၊ အခါကြီးရက်ကြီးတို့ရောက်ရင် ကုသိုလ်ရအောင်ဆိုပြီး သီလယူ ဥပုသ်စောင့် ကြတယ်နော်။ ဥပုသ်စောင့်တာက မွန်းလွဲညစာ မစားဘဲ ကုသိုလ် ဘာဝနာ ပွားများရတာပါ။ ဒီတော့ သေချာတာက နေ့လယ် ၁၂ နာရီ နောက်ပိုင်း ဘာမှ မစားဖြစ်တော့ဘူး ဆိုတာပါ။
ဝိတ်ချဖို့ဆိုရင် ညနေ ၅ နာရီ နောက်ပိုင်း ဘာမှ မစားနဲ့ဆိုတော့ နေ့လယ်၁၂ နာရီ နောက်ပိုင်း ဘာမှ မစားရတဲ့ ဥပုသ်စောင့်တာက ဝိတ်ကျမလားလို့ မေးစရာ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ဒီအဖြေလေးကို သေချာ သိစေဖို့ ဒီဆောင်းပါးလေးကနေ ပြောပြပေးပါမယ်။
ဥပုသ်စောင့် တာက ကုသိုလ်လည်းရ ဝိတ်လည်းကျ
ဥပုသ်စောင့်ဖို့အတွက် ညနေစာ မစားဘဲနေခြင်းက ကိုယ်အလေးချိန် ကျစေဖို့ အထောက်အပံ့ ပေးနိုင်သလို ကျန်းမာရေး အတွက်လည်း အကျိုးများပါတယ်။ ဥပုသ်စောင့်တာကြောင့် တစ်နေ့ကို တစ်နပ် လျှော့စားလိုက်တာက ကယ်လ်လိုရီ စားသုံးမှုကို ကန့်သတ်လိုက်တာပါပဲ။
အစားအသောက်ကို အကန့်အသတ် တစ်ခုနဲ့ စားသုံးတာက ကယ်လ်လိုရီ နည်းစေပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ကို ကျစေသလို အဆီပိုတွေ ဖြစ်ပေးနိုင်ခြေကို ဟန့်တားပေးပါ။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ ဥပုသ်စောင့်တာက သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို ကျဆင်းစေနိုင်သလို နှလုံးရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလည်း လျှော့ချပေးပါတယ်။ ကိုယ်တွင်းက ရောင်ရမ်းမှုတွေကိုလည်း သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ၁၂ နာရီ မတိုင်ခင်မှာ အာဟာရ ပြည့်ဝပြီး ပရိုတင်းကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတွေကို စားသုံးပေးဖို့လိုသလို အမျှင်ဓာတ် ကြွယ်ဝတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ နဲ့ သစ်သီးတွေကို စားပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါမှ အဆာခံနိုင်မှာ ဖြစ်သလို လိုအပ်တဲ့ အာဟာရ ကိုလည်း ပြည့်ဝစေမှာပါ။ အဆီနဲ့ ကယ်လ်လိုရီ စားသုံးမိနိုင်ခြေကိုလည်း အထိရောက်ဆုံး လျှော့ချပေးနိုင်မှာ ဖြစ်တာကြောင့် ဝါတွင်းကာလမှာ ကုသိုလ်လည်းရ ဝိတ်လည်းကျမှာပါ။
သတိထားရမှာ တစ်ခုက ညနေဘက် အစား မစားရပေမယ့် ရေ၊ အချိုရည် စတာတွေကို သောက်လို့ ရတယ်ဆိုပြီး သကြားပါဝင်မှုများတဲ့ အချိုရည်တွေကို မသောက်မိဖို့ပါ။ ဒီအချိုရည်တွေက လူကို ဝစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ​ကြောင့် မနက်ပိုင်းမှာ ပရိုတင်း ကြွယ်ဝတာတွေကို စားသုံးလို့ ညနေဘက်ကို ရေကိုသာ သောက်ဖို့ ပြောပါရစေ။
ဥပုသ်စောင့်နေချိန်မှာ တရားထိုင်တာသက်သက်ပဲ မဟုတ်ဘဲ စင်္ကြန်ပါလျှောက်ပေးပါ။ ဒီလို လုပ်ပေးတာက စိတ်ရော ကိုယ်ပါ ကျန်းမာစေဖို့ အကောင်းဆုံး အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမှာပါ။
ဥပုသ်စောင့်ရင်း ဒီလို အခြေအနေဆို သတိထားပါ
ဝိတ်လည်း ကျ၊ ကုသိုလ်လည်းရ ဆိုပြီး ဥပုသ် စောင့်တယ် ဆိုပေမယ့် ဒီလိုမျိုးတွေ ခံစားလာရမယ် ဆိုရင်တော့ အစား တစ်ခုခု စားလိုက်ပါ၊ လို့ ပြောပါရစေ။
ချွေးစေးတွေ ပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ အစား တစ်ခုခုကို မြန်မြန်လေး စားလိုက်ဖို့ ပြောပါရစေ။
Is Eating One MealaDayaSafe and Effective Way to Lose Weight? https://www.healthline.com/health/one-meal-a-day Accessed Date 28 July 2020
Should I eat just one mealaday? https://www.medicalnewstoday.com/articles/320125 Accessed Date 28 July 2020